Samsung Galaxy S9 izao dia ofisialy, ny masontsivana rehetra sy ny fiasa amin'ny sainam-pirenena Samsung vaovao | Androidsis
Ignacio Sala | | Fitaovana Android, MWC, Samsung
Taorian'ny tsaho efa ho herintaona dia afaka nanala fisalasalana ihany izahay tamin'ny farany ary nanamarina izay tsaho efa voamarina tamin'ny farany ary iza amin'ireo no vokatry ny sain'olona mafanafana izay maniry fatratra ny hanana toerana ambony. Minitra vitsy monja taorian'ny nifaranan'ny famelabelarana fa Azontsika atao izao ny manamafy ny antsipiriany rehetra momba ny sainan'i Samsung vaovao.
Iray amin'ireo zava-baovao manintona ny saina indrindra, hitantsika ao amin'ny fakantsary S9, fakan-tsary izay na dia manana solomaso tokana aza dia manome mihoatra noho ny fisehoana mahatalanjona, fiasa mamela antsika hisambotra fotoana amin'ny fomba tena tsotra misaotra ny varimbazaha miova f / 1,5-f / 2.4, teknolojia tsy haiko. Tsy nahita an-terminal hafa aho.
1 Fakan-tsary Samsung Galaxy S9
2 Fakan-tsary Samsung Galaxy S9 +
3 Ao anatin'ny Samsung Galaxy S9 sy S9 +
4 Fijerena Samsung Galaxy S9 sy S9 +
5 Famaritana Samsung Galaxy S9
6 Samsung Galaxy S9 + Famaritana
7 Fiarovana amin'ny Samsung Galaxy S9 sy Galaxy S9 +
8 Samsung Galaxy S9 vidiny sy ny daty famotsorana
9 Samsung Galaxy S9 + vidiny sy daty famotsorana
Fakan-tsary Samsung Galaxy S9
Raha tsy jerentsika ny faran'ny karazana akorandriaka navoakan'ny orinasa koreana tamin'ny taon-dasa tao amin'ny fireneny, fantsona iray izay manome antsika rafitra fanokafana miovaova izay ahafahantsika maka fotoana fohy amin'ny toe-javatra rehetra, raha mbola fantatsika ny fomba hialana amin'izany. ny tombony azo indrindra, zavatra tena tsotra noho ny maody mandeha ho azy.
Ny aperture farafahakeliny, f / 1,5, dia ahafahantsika maka fotoana fohy miaraka amin'ny hazavana faran'izay ambany sy noho ny rafitra fanamafisam-peo mandeha ho azy an'ny Samsung, ny valiny natolotry ny terminal dia mahatalanjona, amin'ny tsy fisian'ny fizahan-toetra ara-batana ny terminal mba hanaovana famerenana feno sy hamafisina ny hery natolotry ity fakan-tsary vaovao miovaova ity.
Ny fakantsary anoloana an'ny Galaxy S9 dia mitovy amin'ny hitantsika teo alohany, fa miaraka sensor vaovao izay manatsara be ny kalitaon'ny trondro. Ity fakantsary ity dia manome antsika vahaolana 8 mpx, aperture of f / 1,7 ary autofocus.
Fakan-tsary Samsung Galaxy S9 +
Ny fahasamihafana lehibe atolotry ny Galaxy S9 + momba ny teo alohany, hitantsika amin'ny fakantsary roa, fakan-tsary roa izay manome valiny mitovy amin'ny an'ireo hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Galaxy Note 8, ny terminal voalohany an'ny ny orinasa manana rafitra efi-trano roa. Toy ny Galaxy S9, any aoriana dia ahitantsika lens 12 mpx miaraka amina aperture miovaova avy amin'ny f / 1,5 ka hatramin'ny f / 2.4 ary ny masom-pakantsary manana zoro f / 2,4.
Mikasika ny fakantsary eo aloha, dia nisafidy ny hampihatra a Fakan-tsary 8 mpx anoloana miaraka amin'ny f / 1,7 aperture miaraka amin'ny autofocus, na dia tsy mitovy amin'ilay hitantsika ao amin'ny Galaxy S8 sy S8 + aza ny sensor dia nihatsara.
Ao anatin'ny Samsung Galaxy S9 sy S9 +
Zava-baovao iray hafa natolotry ny taranaka fahasivy an'ny Galaxy S9, hitantsika amin'ny habetsaky ny RAM misy amin'ny maodely roa ireo. Be tokoa ny Galaxy S9 toa ny Galaxy S9 dia manome RAM 6 GB ho antsika, mihoatra ny habetsaky ny RAM ka ny fisokafan'ny rindranasa ao anaty fahatsiarovana dia haingana kokoa ankoatry ny fanomezana fluidity bebe kokoa ho an'ny rafitra iray manontolo.
Raha ny momba ny fikirakirana dia tsy mahita vaovao izahay, satria ity modely vaovao ity dia ho hita amin'ny kinova roa, miompana amin'ny tsena samihafa. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ny Qualcomm Snapdragon 845 ho an'i Etazonia, Amerika Latina ary Sina, raha toa kosa Ny Exynos 9810 no ho mpanamboatra izay hitantana ny Galaxy S9 sy ny Galaxy S9 + izay samy tonga any Eropa toy ny firenena sisa.
Fijerena Samsung Galaxy S9 sy S9 +
Samsung dia manaraka ny fironana tamin'ny taon-dasa, mandray efijery 5,8-inch ho an'ny Galaxy S9 ary efijery 6,2-inch ho an'ny Galaxy S9 +. Mbola mitohy ny filokana amin'ny efijery tsy manam-petra, teny iray noforonin'ny orinasa tamin'ny famoahana ny Galaxy S8 sy S8 +. Ireo terminal roa ireo dia manolotra ho antsika ny taha 18.5: 9, tsy miloka amin'ny fotoana rehetra amin'ny marika izay nahatonga ny iPhone X ho lamaody, ary maro ireo mpanamboatra no nanomboka nandray.
Ny Galaxy S9 sy S9 + indray dia mampiasa efijery karazana SuperAMOLED misy a vahaolana amin'ny fitaovana roa 2.960 x 1.440 teboka, miaraka amin'ny tahan'ny efijery izay nanjary be mpampiasa indrindra amin'ireo terminal rehetra izay nahatratra ny tsena nandritra ny taona lasa hatramin'ny nanoloran'i Samsung ny S8 sy S8 +.
Famaritana Samsung Galaxy S9
Famaritana teknika Samsung Galaxy S9
modely Galaxy S9
efijery 5.8 santimetatra - 2.960 x 1.440 dpi
processeur Exynos 9810 / Snapdragon 845
Tahiry anatiny 64. 128 sy 256 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Fakan-tsary aoriana 12 mpx miaraka amina aperture f / 1.5 ka hatramin'ny f / 2.4. Horonantsary mihetsika miadana 960 fps
Fakan-tsary aloha 8 mpx f / 1.7 miaraka amin'ny autofocus
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-banan-tànana - Vahao ny tarehinao - scanner Iris
lafiny X X 147.7 68.7 8.5 MG
lanja Gramin'ny 1634
Samsung Galaxy S9 + Famaritana
Famaritana ara-teknika Samsung Galaxy S9 +
modely Galaxy S9 +
efijery 6.2 santimetatra - 2.960 x 1.440 dpi
Tahiry anatiny 64 128 sy 256 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Fakan-tsary aoriana Fakantsary 2 an'ny 12 mpx. iray misy vavahady miovaova f / 1.5 - f / 2.4 ary ny zoro ambaratonga faharoa f / 2.4. Fihetsiketsehana miadana 960 fps
lafiny X X 158 73.8 8.5 MG
Fiarovana amin'ny Samsung Galaxy S9 sy Galaxy S9 +
Toy ny ankamaroan'ny fantsona nahatratra ny tsena tato anatin'ny volana vitsivitsy, indrindra taorian'ny fampisehoana ny iPhone X, ny Galaxy S9 sy S9 + vaovao koa dia manome antsika rafitra fanekena tarehy, ho fanampin'ilay sensor momba ny dian-tànana nentin-drazana sy mpamaky iris. Mazava fa nifantoka tamin'ny fanolorana rafi-piarovana izay mahatonga ny terminal tsy ho adala ny Samsung.
Samsung Galaxy S9 vidiny sy ny daty famotsorana
Betsaka ny tsaho tato ho ato, izay nanambarana fa ny flagship Samsung vaovao dia mety mihoatra ny 1000 euro, amin'ny maodely tsy dia manana fahaiza-manao. Araka ny nampahafantarinay anao andro vitsivitsy lasa izay, ny vidin'ny Samsung Galaxy S9 dia manomboka amin'ny 849 euro.
Ity modely ity afaka mamandrika ianao izao Hatramin'ny 8 martsa dia hanomboka handray azy ireo mpampiasa mitahiry azy io, saingy tsy hahatratra hatramin'ny 16 martsa izao, rehefa tonga eo amin'ny tsena ity terminal ity.
Samsung Galaxy S9 + vidiny sy daty famotsorana
Tamin'ny taon-dasa, ny elanelana misy eo amin'ny Galaxy S8 sy S8 + dia 100 euro. Amin'ity taona ity, ny fahasamihafana dia mitoetra tsy miova, ka ny Galaxy S9 + dia hamely ny tsena mitentina 949 euro, 100 euro mihoatra ny zandriny lahy.
Toy ny zandriny lahy, ity modely ity Afaka mamandrika mivantana amin'ny alàlan'ny tranonkala Samsung ofisialy ianao izao, saingy amin'ny 8 martsa ho avy izao vao manomboka mandray izany ireo mpampiasa voalohany izay manao ny famandrihana. Raha tsy te hitahiry izany ianao dia hiandry ny 16 martsa, daty nofidian'ny Samsung hananganana tsena an'ity terminal ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Ny Samsung Galaxy S9 dia ofisialy ankehitriny, ny masontsivana sy ny endri-javatra rehetra an'ny sainam-pirenena Samsung vaovao